Public Meeting Announcement:-The Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG) DMV Chapter – Kichuu
HomeNewsAfricaPublic Meeting Announcement:-The Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG) DMV Chapter
Public Meeting Announcement- The Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG) DMV Chapter
The Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG) DMV Chapter has organized a public meeting on which Mr. Bekele Gerba, the prominent opposition leader of OFC and human rights champion will be present as honored guest.
Saturday, May 12, 2018, 4:00 PM to 8:00 PM
3101 16th St. NW, Washington DC, 20010
We, therefore, kindly invite you to the public meeting and take part in the discussion with the man who shares our concerns and boldly fights for our rights in the country where a dictatorial regime has been subjugating its citizens for over 27 years.
Ilmaan Oromoo #KFO cinaa haa dhaabbannuu
Akkuma ilmaan Oromoo hundi beeknutti qabsaa’onni sabaa #DrMararaaGuddinaa, #BaqqalaaGarbaa fa’a boqonnaa tokko malee lubbuu ofii dabarsanii saba isaanif kennuun kaayyoo qabsaa’ota kaleessaa galmaan gahuuf yeroo uummanni Oromoo fi qeerron Oromoo dammaqanii tokkummaan qabsotti hin galinitti uummanni Oromoo karaa nagaan akka falmatuuf aarsaa guddaa kaffalaa turan. Yeroo garaa garatti dhaaba siyaasaa hundeessanii socho’aa turanis mootummaa abbaa irreen rakkoon guddaan irra gahaa tureera. Qabsaa’onni haqaa kun qabsoo karaa nagaan sirna abbaa irreetti xumura gochuuf koongaransii federaalistii Oromoo #KFO hundeessun qabsoo karaa nagaa amma qeerron qabatte qeerrodhaaf saaqaniiru. Gaaffii qeerron gaafachaa turtee fi jirtu qabachuun ofii irratti hidhamanii rakkatanis qabsoo isaan itti kennan qeerron irraa fuutee galmaan gahuuf falmachaa jirti.
Mootummaan abbaa irree isintuu uummata nurratti kakaase jechuun hooggantoota sabaa kan KFO kana jumlaan hidhatti guuree dararaa guddaa irraan gahaa ture. Gootonni qeerron Oromoo qabsaa’ota hooggantoota ofii aarsaa guddaa wareega qaalii gaafatu kaffaluun afaan bineensaa keessaa gad baasaniiru.
Mormii karaa nagaa injiofanno amma irra geenye argamsiise
hiriira mormii gochuu
gabaa lagachuu fi uggura gabaa gochuu fi kkf qindeessudhaan ofii ibiddaan osoo gubatan mana hidhaa keessatti nyaata fi dhugaatii isaanillee lagachuun qabsoon qeerroo akka ibidda saafaatti diina akka gubu gochaa turaniiru.
Uummanni Oromoo guutun dhaaba qabsaa’onni kunniin qabsoo karaa nagaa bifa qindoomen itti fufuun sirna abbaa irreetti xumura gochuuf hundeessanii karaa nagaan socho’aa jiru #KFO cinaa dhaabbannee
• Hamileen fi waan dandeenyu hundaan akka cimsinu dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsuu barbaanna.
Hooggantoonni sabaa kuni akka warri suusii aangoo qabdu kan kijibaan waggaa 27 guutuu uummata keenya fixaa fi saamaa turte jettu fedhii aangoo osoo qabaatanii OPDO/ADWUI tti siqanii aangoo argatu turan.
Osoo qabeenya fi qananii barbaadanii biyya gad lakkisanii beekkumsa qabaniin biyyoota gurguddoo keessatti hojjatanii qanani’u ture.
Isaan garuu aangoo hin barbaanne.
Qananii fi sooramanii jiraachuu irra uummata isaanif of kennanii rakkatanii, gadi cabanii, reebamanii, Hidhamanii ibiddaan gubatanii ofii kabaja dhabanii qullaa uffata malee akka dhaabbatan humna waraanan dirqamanii ofii kabaja ofirraa mulqanii saba kana kabachiisudhaaf aarsaa guddaa kaffalaniiru.
Ilmaan Oromoo qabsaa’ota nuuf jecha kabajaa dhaban gootota haqaa kan nuuf jiraachaa jiran cinaa dhaabbachuun KFO hanga gandaatti waajjira isaa ofik keenyaa dhaabbachuun sirna abbaa irree waggaa 27 guutuu nu gabroomsaa turetti xumura akka goonu dhalataa Oromoo hundaaf waamicha Oromummaa isiniif goona.
Namni dhaamsi tun isin geesse karaa keessan(messenger,Viber,Imo,
Whatsapp, Telegram sms fi kkf yoo xiqqaate nama 20f akka dabarsitan adaraa isinitti haa taatu)
#KFOn DHAABA KEENYA NI JABEESSINA!”